Horudhac: Deportivo Alaves vs Barcelona… (Koox baxsad ka ah u laabashada heerka labaad, una dabaal dageysa 101 sano guuradeeda oo la ciyaareysa koox guul u oomman) – Gool FM
(Vitoria-Gasteiz) 23 Jan 2022. Kooxda halista ugu jirta inay u laabato horyaalka heerka labaad ee dalka Spain ee Deportivo Alaves ayaa caawa kulan ka tirsan La Liga soo dhoweyneysa kooxda Barcelona oo kusoo laabaneysa ole’olaheeda horyaalka kaddib dharbaaxooyinkii kasoo gaaray Spanish Super Cup iyo Copa del Rey.
Naadiga Alaves ayaa ku jirta kaalinta 19-aad ee kala sarrenta horyaalka Spain iyadoo leh keliya 17 dhibcood halka Barca ay ku jirto kaalinta toddobaad ee kala sarreynta iyadoo 32 dhibcood, guul ay gaarto ayaysa ku geli kartaa kaalinta shanaad.
Deportivo Alaves oo u dabaal dageysa sanad-guuradeedii 101-aad ayaa maanta heli karin xiddigaheeda kala ah Ximo Navarro iyo Ruben Duarte kuwaasoo dhaawacyo qaba halka Mamadou Loum uu ku maqan yahay tartanka qarammada Afrika.
Dhinaca kale, Barcelona ayaa weyneysa da’yarkeeda Ansu Fati kaasoo dhaawac kaga baxay kulankii Copa del Rey laga reebay kooxdiisa waxaana xiddigaha dhaawaca ah uu kula biiray Sergi Roberto, Samuel Umtiti iyo Eric Garcia, halka Gavi uu ganaax ku seegayo kulankaan kaddib casaankii la siiyay ciyaartii Granada.
Barcelona ayaa guuldarro la’aan ah toddobadii ciyaarood ee ugu dambeysay La Liga oo ay booqatay Alaves iyadoo afar guul gaartay kulammadaas saddexda kalena barbarro gashay, waxayna shabaqeeda difaacatay lix ka mid ah kulammadaas.
Alaves ayaa ku fashilantay inay ka adkaato Barca 10 kulan oo ay La Liga ku wajahday waxayna la gashay labo barbarro halka siddeed guuldarro ay la kulantay.